चिठी लेखेर के भने मोदीले इमरान खानलाई ? के लेखिएको थियो चिठीमा – ramechhapkhabar.com
चिठी लेखेर के भने मोदीले इमरान खानलाई ? के लेखिएको थियो चिठीमा
काठमाडौं– भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई चिठी लेखेका छन्। पाकिस्तानी स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा बधाई दिँदै उनले आफ्नो समकक्षीलाई चिठी लेखेका हुन्। छिमेकी देशको रुपमा पाकिस्तानी जनता खुसी रहुन् भन्ने कामना मोदीले गरेका छन्।
दुई देशबीच मित्रताका लागि विश्वास र भरोसाको वातावरण हुनुपर्ने मोदीले बताएका छन्। मोदीले खानलाई कोरोना महामारीसँग जुध्नका लागि पनि शुभकामना दिएका छन्। केही दिनअघि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुँदा पनि मोदीले खानलाई शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका थिए।
एक आपसमा लड्दै आएका भारत र पाकिस्तानबीच अहिले संघर्षविराम भएका छन्। दुवै तर्फबाट युद्धविरामको पूर्ण रुपमा पालना भइरहेको बताइएको छ।
रुसका राष्ट्रपति पुटिनले लगाए खोप, तर तस्बिर खिचाएनन्
रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाएका छन् । रुसी नागरिकलाई खोपका लागि प्रेरित गर्न भन्दै पुटिनले खोप लगाएका हुन् । यसअघिका विभिन्न गतिविधिहरु सार्वजनिक रुपमा गर्ने गरेका पुटिनले खोप भने गोप्य रुपमा लगाएका हुन् । खोप लिँदै गरेको तस्बिर वा भिडियो उनले खिचेनन् ।
पुटिनले कुन खोप लिएका हुन् भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयले खुलाएको छैन । प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले सबै तीन रुसी खोप पूर्ण रुपमा विश्वसनीय र प्रभावकारी रहेको र त्यही दर्शाउनका लागि राष्ट्रपतिले खोप लगाएको बताए ।
रुसमा अहिले खोप अभियान निकै सुस्त गतिमा चलिरहेको छ । राष्ट्रपति पुटिनले खोप लगाएपछि त्यो क्रम तीव्र हुने अपेक्षा गरिएको छ ।